३० वर्षीया मेयरका प्रत्यासी रजनीको कन्फिडेन्स : त्यो मनसँग यो मन जोडिसक्यो, मनलाई पनि नम्बरमा काउन्ट गर्छन् र?
4th May 2022, 06:34 pm | २१ बैशाख २०७९
काठमाडौं : काठमाडौंको उत्तरतिरको पुरानो शहर हो टोखा। त्यही शहरको नामबाट बनेको ‘टोखा नगरपालिका’मा नेपाली कांग्रेसबाट मेयर पदकी उम्मेदवार हुन् रजनी थापा। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा उप प्रमुख पदमा उम्मेदवार रहेकी रजनी ज्ञानमाया डंगोलसँग झिनो मतले हारेर नगरपालिकाको जिम्मेवारीबाट आउट भएकी थिइन्।
अघिल्लो पटकको निर्वाचनबाट पाठ सिकेकी रजनी यसपटक चुनावी प्रचारमा कडैसँग खटिएकी छिन्। ३० वर्षीया उनी जित निकाल्न कुनै कसर छाड्ने मुडमा छैनन्। त्यसैले घरदैलोदेखि मतदाता रिझाउने दौडधुपमा छिन् उनी।
उनीसामु बलिया प्रतिद्वन्द्वी छन् एमालेबाट - प्रकाश अधिकारी। अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई पराजित गरेर मेयर बनेका प्रकाशसँग रजनीको भिडन्त रोचक हुने देखिन्छ। पहिलो कारण थोरै ठाउँमा महिला शीर्ष नेतृत्वमा उम्मेदवार छन्। दोस्रो, उनी गठबन्धनको साझा उम्मेदवार होइनन्। टोखा नगरपालिकामा गठबन्धन नै हुन सकेन एमालेको विरुद्ध। अनुभव भइसकेका मेयरसँग उनी आफ्नै दलको बलबुतामा भिड्दै छिन्।
पीएचडी स्कलरसमेत रहेकी उनको आँटलाई भने यहाँका स्थानीयले सम्मान गरेका छन्। पत्रकारितादेखि समाज सेवामा उत्तिकै अभ्यस्त सुनिएकी रजनीसँग पहिलोपोस्टका नेत्र तामाङ र लक्ष्मी बलायरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेवारी ड्रेसमा चिटिक्क देखिनुभएको छ नि?
गुठीमा पुगेर आएको नि। अर्को कुरा म जन्मेको ठाउँ नै यही हो। म यहाँकै छोरी र दिदी बहिनी हुँ। पहिलेदेखि नै म नेवारी संस्कृतिसँग परिचित छु। मैले धेरै पटक नेवारी ड्रेस लगाइसकेकी छु। हामी युवाले साँस्कृतिक सम्पदा नजोगाए कसले जोगाइदिने? जसका कारण संस्कृति मेरो पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ।
चुनाव आउन धेरै दिन बाँकी छैन, दौडधुप कतिको छ?
उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्नै ढिला भयो। जसकारण हामी अहिले निकै ‘रस’मा छौँ। अहिले त घरदैलो कार्यक्रममै व्यस्त छौँ हामी। प्रत्येक वडा-वडा जाने योजना छ। २६ गतेसम्म टोखाका सबै नगरबासीको घरदैलो पुग्छौँ।
घरदैलो पुग्दा जनताहरूले के भन्छन्?
टोखा नगरबासी निकै खुशी हुनुहुन्छ। हिजो मैले टोखाका लागि राम्रो काम गरेको थिएँ। यही आधारमा मेरो उम्मेदवारी हो। आमाबुवाहरूले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। महिला दिदी बहिनीहरू पनि ‘हामी छौँ’ भन्नुहुन्छ। सबैको माया देख्दा आफ्नो दुई वटा जन्म भएजस्तो अनुभव भइरहेको छ। एउटा मेरा आमाबुवाले धापासीमा मलाई जन्म दिनुभयो। अर्को राजनीतिले।
अघिल्लो चुनावमा उप प्रमुख नै जित्नु भएन, यसपटक मेयरमै भिड्ने आँट गर्नु भएछ?
पार्टी संगठनले नै मलाई आँट दियो। म पार्टीमा क्षेत्रीय सचिव छु। पार्टीमा चुनाव जितेरै आएको व्यक्ति हुँ। अर्कोतिर, फाउन्डेसन मार्फत् धेरै काम गरेको छु। साथै, पढाई सँगसँगै व्यवसाय पनि हाँकेकी छु। म परिपक्क छु। जसका कारण टोखा नगरपालिका हाक्ने आँट गरेकी हुँ।
सबै जनाले विश्वास गर्ने भनेको आफ्नो कर्मलाई हो। विगतका दिनमा म जनताको समस्यामासँगै उभिएको थिएँ। हिजो मैले यस्तो काम गरेको छु कि त्यसका कारणले म प्रत्येक व्यक्तिलाई चिन्छु। हरेकसँग मेरो मनको सम्बन्ध छ। र, हामीलाई थाहा जहाँ मन जितिन्छ नि त्यहाँ चुनाव जित्न गाह्रो हुँदैन।
टोखामा तपाईँले जित्ने आधार के त?
टोखा नगरपालिकाका हरेक व्यक्तिलाई काम मन पर्छ। मैले विगतका पाँच वर्षमा राम्रा काम गरेको छु। मैले जित्ने आधार र धरातल भनेकै मैले गरेका काम हुन्।
दोस्रो जित्ने आधार भनेको संगठन पनि हो। कांग्रेसले यसअघि पाँचवटा वडा जितेको थियो। उहाँहरूले जनतासँग समन्वय र सहकार्य गरेर धेरै राम्रा काम गर्नु भएको छ। ती सबै राम्रो कामहरू जोडेर नै मेरो जित्ने आधार बनेको हो।
टोखा नगरपालिका भनेको ठूलो कुरा होइन। यो झन् सहज हो। किनकि यहाँ आफ्नै कार्य प्रणाली, आफ्नै बजेट र जनता छन्। यस जत्तिको सजिलो अरू काम हुन सक्दैन।
महिला भएकै कारण मेयरमै उम्मेदवारी पाउनुभयो है?
यो कुरा चाँहि म मान्दिन्। म आफैँ सक्षम महिला हुँ। महिला हुँदैमा सक्षम हुँदैनन् भन्ने हुँदैन। जब म राजनीतिमा आएँ, मैले सबै कुरा त्याग्न सक्छु। सहन सक्छु। सधैँ अपग्रेड हुन्छु भनेर आएकी हुँ। मैले गरेका राम्रा काम हेरेर मलाई पार्टीले टिकट दिनुभएको हो।
कांग्रेसको नेताले क्षमतालाई हेर्नुहुन्छ। त्यो विश्वास उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अन्तिमसम्म पनि मेरो टिकटको लागि लड्नु भएको थियो र प्रचारप्रसारमा पनि सघाउनु भएको छ। मैले कुनै पूर्वाग्रहबिना टिकट पाएकोले म यो कुरामा निकै भाग्यमानी मान्छु।
महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर टिकट पायो भन्ने आरोप लाग्नु नै दुर्भाग्य हो। म महिला हुँ। मेरा चुनौतीहरू धेरै छन्। हुम्ला, जुम्ला र हरेक जिल्लाका महिलाको आवाज हुनुपरेको छ। त्यस कारणले म झन् बलियो छु। सबैकुरा हाँक्नसक्ने क्षमता महिलासँग नै हुन्छ। हामीलाई कसैको पनि जरुरत पर्दैन। हामीलाई आवश्यकता छ त केवल जनताको विश्वासको। हामीले एक घर सिर्जना गर्न सक्छौँ भने समाज किन सिर्जना गर्न सक्दैनौँ?
टोखाको विकासको लागि तपाईँसँग के - कस्ता योजनाहरू छन्?
म जत्तिको युवाले कुनै योजना ल्याउनुअघि त्यसमा परिपक्वता चाहिन्छ। भिजन सहित मैले प्राविधिक रूपमा बलियो टिम बनाएको छु। म तीन किसिमको विकासमा जोड दिन्छु। पहिलो विकासलाई जनताले दीर्घकालसम्म आँखाले देख्‍न पाओस्। दोस्रो, विकास निर्माणको काम भएपछि जनताले प्रत्यक्ष फाइदा लिएर राम्रो भन्न सकुन्। र, त्यो विकास जसले जनताको जीवन प्रक्रिया सहज बनाएर समाजको उन्नति र प्रगति होस्।
म कुराभन्दा पनि काम गर्न आएको व्यक्ति हुँ। विकास भनेको पूर्वाधारको मात्रै विकास होइन। सोचको पनि विकास हो। सोचको विकास भएको खण्डमा पूर्वाधारको आफैँ विकास हुन्छ। पूर्वाधार भनेको आवश्यकता हो। मैले उपमेयरको उम्मेदवारी दिँदा पनि मेरो एउटै एजेन्डा थियो। ‘हाम्रो टोखा राम्रो टोखा’। जहाँ जे कुराको आवश्यकता छ त्यही कुरा गर्नुपर्छ। जब आधारभुत आवश्यकताहरू पूरा हुन्छन्। अन्य विकास स्वत: राम्रो हुन्छ।
तपाईँको प्रतिद्वन्द्वी पनि कमजोर हुनुहुन्न नि?
हामीजत्तिको युवाले राम्रो कामको तारिफ र नराम्रा कामको खण्डन गर्न सक्नुपर्छ। चाहे त्यो जो सुकै व्यक्ति किन नहोस्। उहाँले मेयर हुँदा गरेको काम पनि देखियो। बिहान म हिँड्दै गर्दा मेरो आँखाले देख्यो विकास हुँदैछ भनेर। तर, हप्ता महिना नबित्दै त्यही बाटो हिँड्दा गाह्रो हुन्छ भने त्यसलाई कसरी विकास मान्ने? क्षणिक विकास त विकास होइन नि। विकास भनेको दीर्घकालीन हुनुपर्छ। भावी पुस्तासम्म पनि टिक्ने विकास मेरो विकासभित्र पर्छ।
कति मतले हराउनुहुन्छ उहाँलाई?
मैले राम्रा काम गरेर टोखा नगरपालिकाका जनताको मन जितिसकेकी छु। उहाँहरूको व्यवहार पनि चिनेकी छु। त्यो मनले यो मनलाई जोडिसकेको छ। जसकारण त्यो मनलाई म कहिले काउन्ट गर्दिनँ। मलाई उहाँहरूको मायामा पूरा विश्वास छ।